Juventus Oo Guul Ka Gaartay Lazio, Iyo Fiorentina Oo Garaacday Ac Milan Kulan Leeska Dhaliyay 7 Gool, Natiijooyinka Kulamada Serie A Italy
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo guul ka gaartay Lazio, iyo Fiorentina oo garaacday Ac Milan Kulan leeska dhaliyay 7 Gool, Natiijooyinka Kulamada Serie A Italy
November 21, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
kooxda Juventus oo booqasha ugu tagtay kooxda Lazio kulan ka tirsan Horyaalka Serie A Italy ayaa guul kasoo gaartay ciyaar ku soo dhamaatay 0-2.
Labada Gool ee Juventus ku badisay kulankan oo rigoore ahaa waxaa u saxiixay Daafaca Leonardo Bonucci.
Qeybta hore Daqiiqadii 23aad Kooxda Juventus ayaa qabatay hogaanka ciyaarta Leonardo Bonucci ayaana u dhibaay iyadoo lagu kala nastay goolkaasi.
Leonardo Bonucci ayaana hogaanka ugu sii dheereeyay gool kale oo rigoore ahaa qeybta labaad Daqiiqadii 83aad ee ciyaarta.
kooxda Juventus ayaa ku jirta kaalinta 7aad iyadoo leh 21 dhibcood marka la eego guusha caawa.
Dhanka kale Ac Milan ayaa guul daro kala kulantay kooxda Fiorentina kulan leeska dhaliyay 7 Gool isla markana qeybta hore la fogeeyay Ac Milan.
Xidiga Alfred Duncan ayaa hogaanka u dhiibay Fiotentina daqiiqadii 15aad isagoo ka faa’ideestay kubad uu qaladkeeda lahaa goolhaya Ac Milan waxana gool kale ku daray Riccardo Saponara oo kubad Qurux badan shabaqa dhex dhigay Daqiiqadii 45+1aad ee ciyaarta iyadoo lagu kala nastay labadaasi gool.
Qeybta labaad Ac Milan ayaa goolkii Saddexaad looga naxsaday Dušan Vlahović ayaa dhaliyay gool Qurux badan isagoo si feecan u koontaroolay kubad banaaanka loo soo dhigay ka hor inta uusan goolhayaha u jarin sidaasna shabaqa ugu hubsan.
Xidiga Zlatan Ibrahimović ayaa u dhaliyay labo gool oo deg deg ah Daqiiqadii 62aad iyo 67aad lakin kuma filnaan Fiorentina ayaa heshay goolka afaraad ee ciyaarta waxana u saxiixay mar kale Dušan Vlahović halka Ac Milan ay heshay gool ay iska dhaliyeen Fiorentina guud ahaan kulanka ayaa ku soo dhamaaday 4-3.
Ac Milan ayaa ku jirta kaalinta 2aad ee horyaalka halka Fiotentina ay soo gashay booska 6aad.